February 2013 ~ လမင်းတရာ
Teamviewer v8.0.16642 Professional Full Version (6MB )
IN Remote Control - ON 11:40 PM No comments
နိုင်တဲ့ Software ဖြစ်ပါတယ်..ကျွန်တော်တို့ ဘလော့ဂါ တွေလဲအသုံးများပါတယ်..ဥပမာ တစ်ခုအနေနဲ့ပြော
ရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ့စူပါကွန်နက်ရှင်နဲ့ ဖိုင်ဆိုဒ်ကြီးတာတွေကို တင်ဖို့အဆင်မပြေပါဘူး..
ဒီတော့ နိုင်ငံခြားက အသိတစ်ယောက်ရဲ့ ကွန်ပျူတာကို Team Viewer နဲ့လှမ်းချိတ်လိုက်ပါတယ်...ချိတ်ဆက်မိပြီဆိုရင် သူ့ကွန်ပျူတာကို မြန်မာပြည်ကနေ စိတ်ကြိုက်ထိုင်သုံးလို့
ရသွားပါတယ်..ဒီလိုနည်းနဲ့ တင်ပေးနေတာပါ..ဒါဆိုရင် သဘောပေါက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်...ကဲ..စမ်း
သပ်အသုံးပြုလိုသူများ Download ရယူနိုင်ကြပါပြီခင်မျာ..
Session handover from one expert to another Comment on sessions for billing
Share selected groups with other TeamViewer accounts.
Easy remote printing in your home office.
Remote sound and video.
Remote account logout.
Fixed synchronization issues between TeamViewer Manager and Computers & Contacts.
Fixed LAN connections from version 8 to version6and lower.
1. Install TeamViewer v8.0.16642.
3. Run Patch.exe
IN Recovery Software - ON 11:30 PM No comments
ဒီဆောဝ်၀ဲလ်လေးကတော့ ဓာတ်ပုံပြန်ရှာတဲ့နေရာမှာ 98 % နီးပါ ပြန်ရှာပေးနိုင်တဲ့ ဆောစ့်ဝဲလ်လေးပါ
အခြေအနေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အမှတ်တရဓာတ်ပုံ အရေးကြီးဓာတ်ပုံများ
ပျောက်သွားခဲ့ရင် ဒါမှမဟုတ် ဖျက်မိသွားလျှင် ဒီဆောစ့်ဝဲလ်လေးသာအသုံးပြုလိုက်ပါ
အခြား Recover တွေ အများကြီးထဲမှာ ဒီကောင်လေးကတော့ စိတ်ကြိုက်ဖြစ်တဲ့ ဆောစ့်ဝဲလ်လေးပါဘဲ
Download>>>>www.solidfiles.com (or)zippyshare (or)www.ziddu.com/
Install လုပ်ပြီး သူက လိုင်စင် ဗားရှင်းမဖြစ်သေးပါဘူး လိုင်စင်ဗားရှင်းဖြစ်အောင်
ဒေါင်းထားတဲ့အထဲမှာပါလာတဲ့ Crack ကိုအသုံးပြုရပါမယ်ခင်ဗျာ
အရင်ဆုံး Adroit.Photo.Recovery အိုင်ကွန်ပေါ်မှာ Right ကလစ် နိုပ်ပြီး
Propreties ကို ကလစ်လိုက်ပါ (ဓာတ်ပုံထည့်ရန် )
ပြီးတော့ Find Target ကို ကလစ်လိုက်ပါ အဲဒါဆို
C:\_Program Files\_Digital Assembly\_Adroit Photo Recovery 2012
ဖိုင်ထဲကိုရောက်သွားမှဖြစ်ပါတယ် အဲဒါဆို Adroit.Photo.Recovery.2012
Download လုပ်ထားတုန်းက ပါလာတဲ့ Crack ဖိုင်ကို ကော်ပီလုပ်ပြီး
ဖိုင်ကို Paste လုပ်လိုက်ပါ
Yes or No မေးလာရင် Yes ကိုကလစ်လိုက်ပါ
အဲဒါဆို Adroit.Photo.Recoveryက လိုင်စင်ဗားရှင်းအနေနဲ့
IN Photo Editing - ON 11:11 PM No comments
ဓာတ်ပုံမြင်ကွင်းတွေကို ချုံ့ချဲ့ လုပ်လိုရသလို...မလိုအပ်တာတွေကိုလဲ ဖျောက်ပစ်..ပေါင်းစပ်ပေးလို့ရပါ
အထူးသဖြင့် သဘာဝ မြင်ကွင်းတွေကို ပြုပြင်ဖို့အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ Software ဖြစ်ပါတယ်.. Video Tutorial တွေလဲ ပါဝင်လို့ စတင်အသုံးပြုမယ့် သူများအနေဖြင့်တောင် နားလည်သဘောပေါက်ကြမှာပါ..
This easy-to-use software will offer you the possibility to remove objects from photographs without leaving any visible traces.
Important areas can be specially marked. Ease to learn and use. Includes stepwise animated demo samples. Offers these tools: Resize; Crop; Smart Remove; Smart Resize; Smart Patch.
· Allows you to save the image only inaspecial format (.TPI)
IN Cleaner - ON 10:33 PM No comments
ကွန်ပျုတာသုံးရတာ နှေးနေတယ်ဆိုရင် ဒီဆော့ဝဲလေးနဲ့ ပြင်ကြည့်လိုက်ပါဒီဆော့ဝဲကတော့ အတော်များများ သုံးနေကြ ပြီးသားပါ အခုဟာလေးက ကီးမလိုပဲအပြည့်အ၀ သုံးလို့ ရတာမို့ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါ Registered Version မလို့Free မဟုတ်တော့ပဲ Advanced Setting ကို ၀င်သုံးလို့ ရပါလိမ့်မယ် ။ စက်ကို သန့် ရှင်းဖိုRegistery ကို ရှင်းဖို့အဆင်ပြေတယ် စက် လေးသူများ ယူသုံးကြည့်လိုက်ပါခင်မျာ...........
IN Driver - ON 6:44 PM No comments
DriverEasy Professional 4.4.0.29319 Full Version လေး ရလာလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ..
ကျွန်တော်တို့ဟာ ၀င်းဒိုးမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ Driver တွေ ပျောက်သွားရင် .. မစုံရင်
ဒါမှမဟုတ် Update မဖြစ်ရင် ၀င်းဒိုးစနစ်ကို အကြီးအကျယ် ထိခိုက်စေတယ်ဆိုတာ
အင်တာနက်သုံးနေတဲ့လူတစ်ယောက်အတွက် ၀င်းဒိုးမှာလိုနေတဲ့ Driver ကို ရှာဖွေ
Download ချပြီး Install လုပ်ဖို့ဆိုတာ လွယ်ကူပေမယ့် ခက်ခဲ့မယ့်အချက်နှစ်ချက်က
ကိုယ့်စက်မှာ Error တက်နေတဲ့ (ဒါမှမဟုတ်) လိုအပ်နေတဲ့ Driver တွေက ဘာတွေလဲဆိုတာ သိဖို့ခက်တဲ့အချက်ရယ် အဲဒါကိုသိပါပြီတဲ့ အဲဒီလို လိုအပ်နေတဲ့ Driver အမျိုးအစားအတိုင်း ကွက်တိရအောင် ဘယ်လိပ်စာမှာ သွားပြီး Download ချယူရမဲဆိုတာ သိဖို့ခက်တဲ့အချက်ရယ်ပါပဲ
အခု ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တဲ့ Driver Easy ဆော့ဝဲလေးက အဲဒီအခက်အခဲနှစ်ခုကို ဖြေရှင်းပေးပါလိမ့်မယ်
ဒီဆော့ဝဲလေးကို Install လုပ်ပြီး Run ပေးလိုက်တာနဲ့ စက်ထဲမှာ လိုအပ်နေတဲ့ Driver တွေရဲ့
Latest Version တွေကို ရှာဖွေပြီး Download and Install လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ် .. ( သူ့ကို Run ရင်
အင်တာနက်ချိတ်ထားဖို့တော့ လိုတာပေါ့နော် )
အင်တာနက်မချိတ်ထားတဲ့စက်တွေအတွက်တော့ Driver Pack Solution လိုဆော့ဝဲမျိုးကိုပဲ သုံးရမှာပေါ့
အဲဒီလိုဆော့ဝဲတွေကျတော့ ဆော့ဝဲထဲမှာ ထည့်ထားပေးပြီးသား Driver တွေကိုပဲ Install လုပ်ပေးမှာမို့
Update မဖြစ်တဲ့ Driver တွေလည်း ပါချင်ပါသွားတတ်ပါတယ် ..
ကဲ .. လိုချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများ ဒီမှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ ..
ဒေါင်းပြီးရင် ရလာတဲ့ဖိုင်ထဲက Setup ဖိုင်ကို Run ပြီး Install လုပ်လိုက်ပါ
ပြီးရင် .. Desktop ပေါ်က Driver Easy အိုင်ကွန်ပေါ်မှာ Right Click နှိပ်ပြီး ပွင့်လာတဲ့ထဲက Open file location ကို
နှိပ်လိုက်ပါ .. ပွင့်လာတဲ့ ဖိုလ်ဒါထဲကို ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ထဲက Key file Generator ဆိုတဲ့ဖိုင်ကို ထည့်လိုက်ပါ
အဲဒီထည့်လိုက်တဲ့ဖိုင်ပေါ်မှာ Right Click နှိပ်ပြီး ပွင့်လာတဲ့ထဲက Run as administrator ကိုနှိပ်ပါ
အဲဒီထဲက Select Version မှာ 4xxx ဆိုတာကို ရွေးပါ .. (အခု Version က နောက်ဆုံး Version 4.4.0.29319 ဖြစ်နေလို့ပါ)
အောက်က Days Left မှာတော့ နှစ်ပေါင်းတစ်ရာစာသုံးနိုင်အောင် 100 years ကို ရွေးလိုက်ပါ
License Type မှာတော့ ကြိုက်တာထားပါ ( ကျွန်တော်ကတော့ Normal မှာထားတယ် )
Username မှာလည်း ကိုယ်ကြိုက်တဲ့နံမည်ထည့်ပေးလိုက်ပါ ..
ပြီးရင် Generate ကိုနှိပ်ပါ .. နောက်တက်လာတဲ့ Box တွေကို OK / Yes / Continue ဆိုတာမျိုးတွေကိုရွေးပေးပါ ..
အဲဒါဆိုရင် သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ Driver Easy ဆော့ဝဲလေးဟာ ရက်ပေါင်း 36500 အထိ License Version ဖြစ်သွားပါပြီ
နောက်ထပ် Update ထွက်လို့ ဒေါင်းပြီး Install လုပ်လိုက်မိရင်လည်း Full Version အဖြစ်ကနေ Trail Version ဖြစ်မသွားပါဘူးနည်းပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ကသူငယ်ချင်းအားလုံးကို လေးစားခင်မင်လျှက်
Data Copy Manager 2.0.0 Datecode 05.02.2013 (3.5MB)
IN Software - ON 11:17 PM No comments
ကွန်ပျူတာမှာ ဒေတာတွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကူးနိုင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ဆောစ့်ဝဲလ်ပါ
အခြားအမျိုးစားတွေလည်းရှိပါတယ် စက်ထဲမှာဘာမှ မသုံးထားဘူးဆိုရင်ဒီကောင်လေးကို
သုံးကြည့်နိုင်ပါတယ် သုံးမယ်ဆိုရင် အောက်ကလင့်မှာဒေါင်းလော့ရယူနိုင်ပါတယ်
လိုင်စင်အတွက်ကတော့ ပါလာတဲ့Patch ဖိုင်ကို C:\_Program Files\_WindowIndia\_Data
Copy Managerသွားပြီးတော့ ထည့်လိုက်ပါ ပြီးရင် ကလစ်နှစ်ချက်နိုပ်ပြီးတော့ သော့ပုံလေးကို
ကလစ်လိုက်ရင် လိုင်စင်ဗားရှင်းရပီသူက အခြားဆောစ့်ဝဲလ်တွေနဲ့မတူတဲ့အချက်တော့
Download>>> solidfiles / zippyshare
IN နည်းပညာစာအုပ်များ - ON 10:03 PM No comments
ဒီလင့်မှာ Download ယူပါ - www.mediafire.com/Photoshop အခြေခံစာအုပ်
ဒီလင့်မှာ Download ယူပါ - http://i.minus.com/Photoshop အခြေခံစာအုပ်
CyberLink PowerDVD Ultra 12.0.2428.57 Multilanguage Full Version ( 101 MB )
IN Cyberlink Power DVD - ON 9:32 PM No comments
ဓာတ်ပုံတွေ ..Video တွေကို အဆင့်မြင့် Editing လုပ်တဲ့ လူသုံးအများဆုံး နာမည်ကြီး Software
IN နည်းပညာစာအုပ်များ - ON 9:31 PM No comments
ရေးသားထာတဲ့ photoshop မှတ်စုလေးပါ။ photoshop သမားများအတွက်အသုံးဝင်တဲ့စာအုပ်လေး
photoshop မှတ်စုစာအုပ်အတွဲ (၁)
photoshop မှတ်စုစာအုပ်အတွဲ (၂)
IN နည်းပညာစာအုပ်များ - ON 9:28 PM No comments
IN Photoshop - ON 9:24 PM No comments
Photoshop သမားတွေအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ MAGIX Photo Designer 7.0.1.2 Portable လေးတွေလို
Pointstone System Cleaner 7.0.10.2030 Full Version
IN Software - ON 9:23 PM No comments
မိမိ ကွန်ပြူတာထဲက မလိုအပ်တာတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ရှင်းလင်းပေးပါတယ်သူလုပ်ပေးနိုင် တာတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ ....စိတ်ဝင်စားရင် အောက်မှာ ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ခင်မျာ....
IN နည်းပညာစာအုပ်များ - ON 9:22 PM No comments
Corel AfterShot Pro v1.1.0.30 Multilingual Full Version
IN Photo Editing - ON 9:21 PM No comments
ဓာတ်ပုံတွေကို..Editing လုပ်တဲ့ Software ပါ..ဓာတ်ပုံတွေကို စနစ်တကျ စီထားနိုင်ခြင်း...လိုအပ်တဲ့အခါ အလျှင်မြန်ဆုံးရှာဖွေနိုင်ခြင်း..ဓာတ်ပုံအများအပြားကို Database ပုံစုံပြုလုပ်ကာ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ခြင်း..
Folder များအတွင်းသို့ Management လုပ်ထားနိုင်ခြင်း.. ဓာတ်ပုံများကို အရောင်သွေးချိန်ညှိချင်း... လိုအပ်တဲ့အပိုင်းများကို လိုအပ်သလို ပြုပြင် ချယ်မှုန်းနိုင်ခြင်း..စသည့်Photo Editing Tools များစွာပါဝင်သည့်အတွက် ဒီ Software ဟာလည်း ဓာတ်ပုံ သမားတို့အကြိုက်တွေ့ကြမယ့် Software
IN Photoshop - ON 9:19 PM No comments
ဓာတ်ပုံတွေကို Edit လုပ်ဖို့ပါ... အားလုံး ဝါသနာပါရင် ကလိ လို့ရအောင် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်....
IN နည်းလမ်းများ - ON 9:19 PM No comments
File တွေ Rename ပြောင်းရင်အထက်ပါပုံစံအတိုင်း Error ဖြစ်ပြီး Yes နိုပ်လိုက်လို့ File ပျက်
အခုလို Error ဖြစ်ခဲ့ပါကအရင်ဆုံး MyComputer,MyDocument စသည်ဖြင့်ပေါ့ တစ်ခုခုကို
Tool အောက်က Folder Options... ကိုနိုပ်ပါ
ပြီးရင်အောက်ပါပုံအတိုင်းအဆင့်ဆင့်ရွေးချယ်ပြီး OK နိုပ်ပါ
2 - Hide extensions for known file types ကိုအမှန်ခြစ်ပေးပါ
3- Ok နိုပ်ပါ
Apowersoft YouTube Downloader Suite 3.2.3 Full Version
IN YouTube - ON 9:13 PM No comments
Youtube က Video တွေကို Format အမျိုးမျိုးနဲ့ Download ရယူပေးမယ့် YouTube Downloader လေးဖြစ်ပါတယ်.လိုအပ်သူများ Download ရယူနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ...
The Apowersoft YouTube Downloader Suite is the best YouTube downloader software. It not only helps you download videos from YouTube, but also converts YouTube videos to all video and audio formats you need to watch and listen on your iPod, iPhone, mp3 or mp4 players, etc. You can download and convert YouTube videos to AVI, MP4, WMV, WMA, etc. and make audio files in formats such as MP3, AAC, etc
Released on 02/14/13 for exclusive usage by members of the release scene. This isnt something to share with your school mates and not for sale Go and buy this app if you like it!
In addition, the tool supports editing videos, so you can trim, crop, adjust effects, etc
IN နည်းလမ်းများ - ON 9:11 PM No comments
ကွန်ပြူတာနှေးနေသူများ အတွက်ပါ မြန်အောင် ဖြတ်လမ်းလေးနဲ့ လုပ်ကြည့်ရအောင်နော်
အရင်ဆုံးStart ကိုနှိပ်ပါ။ပြီးရင် window+R ကိုနိပ်ပါ Run box ကိုဖွင့်ပါ။ ပြီးရင် Run BOX ထဲကို Regedit လို့ ရိုက်ပါ။
(Registry Editor ခေါ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်) ပြီးရင်ဘယ်ဘက်
panelထဲက မှ "HEYCURRENT USER" ကို ကလစ်လိုက်ပါ။ အဲဒီထဲကမှ "Control Panel " ကို ထပ်ရွေးပါ။ "
Control Panel " ထဲကမှ Desktop ကို ရွေးပါ။
ညာဘက် အကွက်မှာပေါ်လာတဲ့"Menushowdelay" ကို Right click (သို့)double click နှိပ်ပါ။
Modify ကိုရွေးပြီး editing string value ကို "O" ထားပါ။
ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ Computer ကို Restart ပြန်လုပ်လိုက်ပါ။
window ပြန်တက်လာတာနဲ. ပိုမြန်လာတာကိုတွေ.ရပါလိမ့်မယ်
IN Capture Software - ON 9:10 PM No comments
အရည်အသွေးမြင့်မြင့်နဲ့ Video , Audio စသည်တို့ကို Capture ဖမ်းတဲ့Software လေးပါ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်..လိုအပ်သူများDownload ရယူနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ....
IN Photoshop - ON 9:07 PM No comments
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ နှစ်သက်ရာ ဓါတ်ပုံတွေကို နှစ်သက်ရာ Background များကို အသုံးပြုကာ Effect ပေါင်းများစွာဖြင့် မိမိနှစ်သက်ရာ ဒီဇိုင်းများကို စိတ်ကူးပုံဖော်ပေးနိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးပါ..
IN Internet Download Manager - ON 9:05 PM No comments
Internet Download Manager Version 6.15 Build3Full Version အသစ်ထွက်တာလေးတွေလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ....
Download=>solidfiles / dropbox
IN Cleaner - ON 9:32 PM No comments
IN Cleaner - ON 9:31 PM No comments
IN Cleaner - ON 9:30 PM No comments
IN Cleaner - ON 9:29 PM No comments
IN Cleaner - ON 9:27 PM No comments
IN Cleaner - ON 9:26 PM No comments
IN Cleaner - ON 9:25 PM No comments
IN Cleaner - ON 9:24 PM No comments
IN Cleaner - ON 9:22 PM No comments
IN Cleaner - ON 9:21 PM No comments
IN Cleaner - ON 8:39 PM No comments